UK oo Soomaaliya ka taageereysa la dagaalanka Shabaab | Baydhabo Online
UK oo Soomaaliya ka taageereysa la dagaalanka Shabaab
Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay Dowladda Soomaaliya in ay ka taageereyso la Dagaalanka ururka Shabaab, oo hada dagaal adag kula jira Ciidanka Dowladda iyo Ciidanka ka socda Dowladaha garabka siiya Soomaaliya.
Ambassador Matthew Rycroft, Wakiilka Joogtada ah ee UK u qaabilsan Qaramada Midoobay, oo ka qeyb galay kulan ay yeesheen Gollaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay Dowladda Ingiriiska in mar walba ay garab taagan yihiin Soomaaliya.
“Anigoo ku hadlaya magaca Boqortooyda Ingiriiska iyo shacabka Uk, waxaan si buuxda mar walba u garab taagan nahay Dowladda Soomaaliya oo dagaal kula jirta Argagixisada, inagoo ujeedkeena uu yahay sidii looga guuleysan lahaa Argagixisada” Ayuu yiri Matthew Rycroft.
Sidoo kale Wakiilka Joogtada ah ee UK u qaabilsan Qaramada Midoobay Ambassador Matthew Rycroft ayaa sheegay Dowladda Soomaaliya in ay garab ka siin doonaan sidii dalka ay uga dhici laheyd Doorasho, sidoo kalena Amniga aad loo adkeyn lahaa xilliga Doorashada.
Dowladda Ingiriiska ayaa ka mid ah Dowladaha inta badan taageerada siiya Dowladda Soomaaliya, waxaana dhowr jeer oo hore ay Ciidanka Xoogga Dalka ugu deeqday Aqab Millitari.